ကာဗာနီကယူနိက်တက်အတွက် အပြောင်းအလဲအသစ်တခုကိုပေးခဲ့တယ်ဟု ရတ်ဖို့ပြော – FBV SPORT NEWS
ကာဗာနီက ယူနိက်တက်အသင်းအတွက် အပြောင်းအလဲအသစ်တခုကိုပေးခဲ့တယ်ဟု ရတ်ဖို့ပြော
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၄) အဖြစ် လက်စတာစီးတီးရဲ့ အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ King Power မှာ အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကို သွားရောက်ကစားခဲ့ရမှာ ၂-၂ ဂိုး သရေရလဒ်ဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်မှာ အသင်းရဲ့ အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီကို ဒုတိယပိုင်း မိနစ် ၆၀ ကျော်မှာ လူစားလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကာဗာနီဟာ အသင်းနဲ့ လျင်မြန်စွာ အထိုင်ကျလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသသွားခဲ့ပါတယ်…
ယင်းပွဲမှာ ကာဗာနီဟာ ယူနိက်တက်အတွက် အပြောင်းအလဲတခုကို ပြသခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရတ်ဖို့စ် ကပွဲအပြီးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်..
ရတ်ဖို့စ်က ” ကာဗာနီ ဟာ အသက် ၃၃ နှစ်လို့မထင်ရအောင် ကို လျင်မြန်ပြီး ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီပွဲကသက်သေပါဘဲ…..သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှု ကနေတဆင့် ဘရူနိုဟာ ဒုတိယဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ပြီး သူဟာ ဘိုင်လီရဲ့ အရှိန်မြင့်မှုကနေ ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်အဖြစ်ပါကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်….
လက်ရှိစိန်ပွင့်ကစားကွင့် ကနေ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးကစားကွက်ဖြစ်တဲ့ 4-4-2 ကို ကစားဖို့ ကာဗာနီ နဲ့ မာရှယ်က အဓိကကျလာနိုင်ပါတယ်…အိုလေဆိုးရှားလ် အသုံးပြုမပြုကတော့ ကျနော်မသိပါဘူး…..
ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ နောက်ကို လှည့်မကြည့်တတ်ဘဲ ဂိုးသွင်းဖို့ အာရုံစိုက်ပြီး တိုက်စစ်ဆင်တတ်တဲ့ ကာဗာနီကို 4-4-2 ကစားကွက်မှာ တွဲမြင်ချင်မိပါတယ်…သူဟာ ယူနိက်တက် ကစားကွက် အလှည့်အပြောင်းအတွက် အပြောင်းအလဲအသစ်တခုကို ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး….” Goal မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်…